HAQOO HAQ, SHIROO SHIR! IJJI WAA GARTU OMN DUUBAAN MAAL ARGITI？ – Welcome to bilisummaa
HAQOO HAQ, SHIROO SHIR! IJJI WAA GARTU OMN DUUBAAN MAAL ARGITI？
bilisummaa December 6, 2014	1 Comment
By EDITORIAL BOARD OF OromoTV.com
Afraasa 06 br 2014
Cancala ykn luugama fuunaan fardi beekee jeama. Akkuma mataduree irraa hubatamutti, OMN eega maqaa dhoofne adeemsi barruu kanaatiis dhimma sabaahimaa ykn sab-qunnamtii ykn media kanaa gulaaluuf akka tahe shalaguun nama hindhibu. Mataduree kana filachuun keenyaas jidduu kana gurri ol galuu fii kan gad galuus wanni hafarsu kanuma waan taheef dhimma kana irratti xinxala gama keenyaa gumaachuuf jenneeti. Akkaatuma kanaan barbaachisummaa odeeyfannoo tii fii shoora sabaahimaa irraa jalqabuudhaan, haala yeroo OMN fii isa duubaaniis eenyu yakkinee eenyu faarsuu akka qabnu osoo hintahin adeemsi kun garam akka nugaggeeysaa jirru eeruu barbaadneeti. Akkeekni barruu kanaatiis dhimma kana irratti akka oromootti ija ogummaatiin hubannoo waliigalaa horachuuf qooda gama keenyaa gumaachuuf haalli yeroo waan nudirqisiiseefi.
Barbaachisummaan odeeyfannoo yoomiyyuu taanaa, kan wal nama gaafachiisuu miti. Hawaasni tokko akkaatuma bara keeysa jiruutiin jireenya isaa milkeeysuun dirqama isaa kan namoomaati. Fakkeenyaaf akka hawaasaatti jiruu ofii gaggeeffachuuf oomishachuun dirqama eega tahe, odeeyfannoo haala qilleensaa argachuuniis hammasuma takka dirqama taha. Eega oomishame ammaas bitii fii gurgurtaan waan feesisuuf odeeyfannoo magaalaa barabaaduun waan hafinsa hinqabne. Kanaan maddittiis qunnamtiin hawaasaa fedhii garagaraa waan ammattuuf odeeyfannoo dhihana walaansaa, kan barnootaa tii fii kan akka barbaachisu ni amanama. Hammasuma takka ammaas hariiroon ummataa taligaa siyaasaatiin ala tahuu waan hindandeenyeef odeeyfannoo siyaasaa heluun fedhii osoo hintahin dirqama sabummaa akka tahe shakkiin hinjiru. Haqa uumamahawaasummaa kana irratti hundaauudhaan hawaasni kamiyyuu taligaa odeeyfannoo kan mataa isaa qabaachaa akka ture shalaguun nidandayama. Daandii seenaa keeysa ifbooda deebinee yomilannu taligaan ittiin odeeyfannoo waliif gumaachaa turan bakkuma itti waqunamanitti wal odeeyfachuu irraa eegalee walitti qabamanii yaada waliif gumaachuuniis ifiifuu gaafasiif sabaahimaa bara saniiti ture. Lakkuma barri marmaa deemuuniis, lakkoosa ummataa qofa osoo hintahin, qaroomni teknooloojiitiis guddachaa dhufuudhaan taligaan odeeyfannootiis waltajjii gandaa irraa gama sab-qunnamtii biyyaatti guddachuun ittibaha adeemsa kanaati. Biyyaaleysummaa qofattiis osoo hin hornogamin arra taligaan odeeyfannoo tii fii shoorri media addunyaan guutuun ganda tokko taate hamma jeamtu takka irra gaheeti jirsa. Kana jechuun ammaas guddina qarooma roga kanaatii wajjiin, barbaachisummaan odeeyfannoo sadarkaa ittiin gargaaraminsaa bira taree hammuma nyaataa fii dhugaatii takka ulaagaa jiruu fii jireenyaa taheeti jira jechuun nifdandayama.
Eegasiifuu jaarraa odeeyfannoo kana keeysatti hanqinni odeeyfannoo dhibaayyuu akkam muduu dandaya? Gaafiin jettuus kauun nimala. Gaafii ulfaattuu taattullee deebisaan isii garuu laaftuudha. Maaliif yojeame, jaarraan keeysa jirru umrii odeeyfannoo eega tahe, odeeyfannoodhaan alatti ummata zabana kanaa tahuun waan hindandayamneefi. Dhugaadhaa, akka ummata naannoo tokkootti asoosamanii jiraachuun nimala taha. Akka qaama addunyaa tanaatti garuu dammaqaan hirmaatanii fedhii ofii guuttachuuniis tahe mirga ofii gonfatanii malaggaa dorgommii ardii tanaa fullahuun kan yaaddamuumiti. Akka waliigalaatti, sababa hedduu tarreeysuun dandayamullee, oromooniis akka sabaatti illima hiyyummaa tii fii maraammartoo siyaasaa keesaa bahuu hanqachuu isaatiif sababni tokko kanuma.
Ragaa hamma tokko eeruudhaafiis, dhugaadhaa, lolli bar dhibbee dabre keeysa oromootaa fii nafxanyoota jiddutti gaggeeyfame sun, jecha gabaabaadhaan, lola qawwee fii eeboo jiddutti adeemsifame tahullee, habashootni eega lola kana qaamaan injifatan booda duulli walfaannoommii qabu kan isaan oromoo irratti gaggeeysaa turanii fii ammallee ittifufaa jiran duula sammuu akka tahe beekkamaa dha. Kanaaniis akka sabni kun eenyumaa isaatiin walhinsimnee fii faffacaee hafu godhuudhaan oggolchuudha ture tarsiimoon isaanii guddoon. Amantiilleen osoo hinhafin gosaa fii naannoodhaan gargar dhilliyanii maqaa garagaraatiin yaamuudhaan wal afaan dachaasuudha ture tooftaan isaanii fokkattuun. Haalli kun akka isaan harkaa hinfashalleefiis malli tokko oromoon akka sabaahimaa hinqabaanne taasisuun qaama tarsiimoo tanaa hoggaa tahu, yo afaan isaaniitiin sab-qunnamtiileen wahii banamaniis afaan oromoo radiyoona cabsa hamma jean takkatti saba kana media irraa fageeysuudhaaf tattaafachaa akka turan yaadanoo yeroo gabaabduuti.
Silallettuu dubbiitu dubbii kaasaa, dhimma kana kaasuun keenya eega hin oolamin, afaan oromoo raadiyoona akka hincabsine hujiidhaan kan mirkanaawe br 1970 moota keessa eega raadiyoonni Mogadishu baname booda hoggaa tahu ololla moottummaa Somalia ololaan ittisuuf jecha nafxanyootni br 1974 keeysa raadiyoona Harar banuudhaaf dirqamuun isaanii ooluu baattullee, akka kutaallee oromiyaa kanneen biraa keeysatti hindhagayamne Laga hawaashii gaditti hornoguudhaan, ammaas tahu akka sabni wal hinsimne shira madhawuun isaanii hinoolamne. Warraqsa dargii boodaas tahu afaan oromootiin tamsaasa raadiyoonaa finfinnee irraa jalqabuudhaaf haalli isaan dirqisiisuus gama TV osoohintarkaanfatin hamma br 1991 akka ture hubannoo kaleeysaati. Achii asiis tahu Tv fii radiyoonaan wanni tamsau yolaalame ummataaf odeeyfannoo gumaachuuf osoohintahin, sab-qunnamtiilleen wayyaannee tun afaan oromootiin oromoo afanfaajjeeysuu irra matuma galeehuu osoo cufamanii irra caalaadha yojeame dogoggora nutti hinfakkaatu.
Kanumaan walqabatee imaammata mataa isaanii kan ittiin hundaawan qabaachuun isaanii osoo hindagatamini, sabaahimaalleen diidaa kanneen akka VOA damee afaan oromoo tii fii kkf qilleesa irra jiraatanillee gabaabina yeroo isaanii tii fii ammaa amma ukkaamsamaa jiraachuu isaanii caalaa biyya keeysatti agabaaftota gayaa bobbaasanii hojjachuu dhoowwamuu isaaniitiin hamma silaa tajaajiluu malan takka sossoohuu hanqachuu isaanii mootummaa USA dabalatee hawaasni addunyaa hundi ragaa bahaati jira. Radio fii Tvn asmaraatiis akkuma raadiyoona Mogadishu kan dur sanitti afaan oromoo dubbachuu irraa kan hafe, kan olola motummaa isaaniitiin muddame malee kan dantaa oromuutiif dhimmamu waan hintahiniif oromooniis isaan irraa waan eeggatu hinqabu. Hamma yeroo gabaatti sab-qunnamtiin akka kan oromootti maqaa dhawamu yojiraate sagalee bilisummaa oromoo, SBO dha. inniniis tahu tamsaasa halaa kan qulqullummaa dhaan hindhagayamnee fii ummata isaa irraa fagaachuu caalaa hammuma VOA takkallee biyya keeysaa gabaasuuf carraa kan hinqabne tahuu daran kan siyaasaa dhaaba tokkoo qofa leellisu taachaa, walaba tahee fedhii oromoo guututti nicalaqqisiisa jechuun hindandayamu. Tamsasini radio fii Tv kan community fii matayyaa tokko tokkoos adungaa halaalaa keeysa jiraachuun isaanii tattaaffii nama jajjabeeysitu hoggaa tahu ummata oromoo kan internatii dhiisiitii human tirikaatu hinqabne dhaqqabuu akka hindandeenye beekkamaadha.
Karaa biraatiin zabana globalizationii kana keeysatti hawaasni kamiyyuu odeeyfannoodhaan alatti addunyaa wajjiin tarkaanfachuu dhiisiitii, jiraachuuhuu akka hindandeenye jala murameeti jira. Sabni oromooniis qaamuma hawaasa addunyaa tahuu daran qabsoo hadhooytuu keeysatti argama. Qabsoo bilisummaa. Kanaafuu haala akkanaa keeysatti sab-qunnamtiin ciccimoon hedduun akka isa feesisu shalaguun eega dandayame, matuma galeehuu sabaahimaa dhabuun ammoo hangam takka akka isa miidhu hubachuun nama hindhibu. Haala danqaa fii abdii nama kutachiisu kana keeysatti ture gaa, karoorri Oromo media network, OMN, hundeeysuudhaa kan as bahe. Baqqattootni oromoo kanneen biyya ambaa keeysa jiraataniis maaliif? Akkamitti? Eenyuun? Osoo hinjain karoora milkaawaa kana dimshaashumaan ofitti fudhatee tii fii gumaata barbaachisu hunda arjoomee yeroo muraasa keeysatti akka hujii irra oolu wanni taasiseefiis ummata oromoo miloyoona 40 olitti shalagamu kana dhabsuu odeeyfannoo kan yeroo dheeraa keeysaa baasuudhaafi. Dhugumattuu warri karoora kana ulfaayee fii hawaasni oromoo kan ulfa kana deeysisees hundi isaaniituu galatni isaanii hoonga hinqabu yojenne yo itti xiqqaate malee itti hinbaayyatu.
Karoora milkaawa kanaan duuba eenyufaatu jira? Gaafiin jettu hamma ammaattiis tahu ifatti deeb’iuu baattullee Jawaar Mohamediis dabalatee Mohamed Ademo fii fakkaattota isaanii hamma okko akka turan nihimama. Yeroo gabaabaadhaa as maqoon gariin takka takkaan as babahuu eegaltulle jalqabuma irraahuu gaafa karoorri kun ifatti hujii irra oolu Mohamed Adamoo ogummaa isaatii wajjiin media kanaan ala tahuun isaa quurrama guddaa uumuun hindagatamu. keeysumattuu Jalqaba irraa kaasee galii maddisiisuu irratti shoora guddaa taphachuu dhaan kan beekkamu, xixalaa siyaasaa kan tahe, Jawaar Mohamed hoggaa tahu eeyba projectii kanaa irratti hooggana sabaahimaa kanaa irraa ala ofgodhee asbahuun isaa waan hin eeggamin tahullee gam tokkoon hujiin media ogummaa isaatiin ala waantaheef karaa kaaniin ammaas jahataniin oromoo guddaan hujii siyaasaa waan taheef projectii kana galmaan gahee, hujii fii hojjataa walitti kennee gama roga inni caalmayaan itti barbaachisutti deebiuufi jechuudhaan maqaa caalaa abdii guddaas horachuu dandayeeti ture. Akkaatuma kanaan hoogganni ol aanoon ummata duratti muudamanii irbuudhaan hujii kana ofitti fudhatan dura buaa boordii Dr Hamza Abdurazaaq irraa eegalee namoota hingoomne, warra ogummaa fiinxee qaban, namoota beekkamoo fii kabajamoo hedduu waan ammatuuf Jawaar alatti of hanbisuun isaa dhugumattuu tarkaanfii bilchalaan fudhatamte taatee akka deeggramte dhaamsa garagaraa kan guyyaa eeybaa san caqafame irraa hubachuun nidandayama.
Dandeeyytiin hooggana kanaa kan madaalamu raawii hujii sabaahimaa kanaatiin waan taheef yeroo gabaabaa jia saddeetii kana keeysatti baasa baasuun irraa eeggamuu baatullee, hariiroo hujii bareeddaa fii tasgabbii bulchiinsaa gaarii uumuu dadhabuun ofiifuu hanqina guddaadha yojenne dhugaa irraa nuhinfageeysu. Haala kanaan ammaas sabaahimaan kun laphaalapheeysa ummataa caqasee hujii milkooytuu mulisuu daran mudaammuddii caasaa isaa tan keeysaati kulkulchuu irratti xiyyeeffachuuf dirqamama malee tajaajjila ummataa kan isa irraa eeggamu irratti fuulleyfachuu hindandayu. Sabaahimaan kun jaarmaya qonyee hawaasaa irratti irkatee jiraatu waan taheef lakkuma tajaajilli isaa babalatuun galiin isaa dagaagdee umriin isaatiis akka dheeratu niamanama. Hammasuma takka ammaas lakkuma tajaajilli isaa kottoonfachaa dhufuun harkki isa tinisuus dadachaee umriin isaatiis gabaabbachaa akka deemu shakkii hinqabu.
Rakkinni media kana mudachaa jiru kun fuulleedhatti dura kan calaqqise tuuta editorialii keeysaan tahulle hanqina murna ogummaa kanaaf suduudaan kan ittigaafatamu koree bulchiinsaa waan taheef gamuma qaama dhimmi ilalu kanaa xiyyeeffachuun hinoolamu. Koreen bulchiinsaatiis tahu qaama isaa olii kan ola’antummaa dhaan ittigaafatama waliigagalaa baadhatu jalatti waan argamuuf ittigaafatamni maayyiidhaa kan jigu boordii daayreektarootaa irratti tahuun kan wal nama gaafachiisuu miti. Ibsa dureen boordii kanaa kan duraanii Pr Hamzaa Abdurazaaq walfaana baasan irraahiis kan hubatamu kanuma. ittigaafatama isaanii lakkisuun isaaniitiis sababuma kanaan akka ture nibeekkama. tarkaanfiin isaanii kuniis aalii OMN hunda jabo gaddisuu hin oolle. Ibsa Dr hamzaa tii fii quurrama hojjattootaa qofa osoohintahin, akka keeysa beektotni hedduun anaannachaa jiranitti ammoo sababa rakkina kanaatiin Pr Hamzaan angoo lakkisuu caalaa wanni daran nama gaddisiisu rakkina kanaan duubatti kan qubni itti laatamaa jiru Jawaar Mohamed tahuu isaati.
Akka ibsa isaanii irraa hubatamutti Dr Hamzaan ittigaafatama isaanii lakkisuuf kan dirqaman rakkina OMN mudate kana furuudhaaf tattaaffii walfaannoommii qabdu heedduu eega godhaniin booda tahuu isaati. Tattaaffiilleen hundinuu milkaawuu dhabuuniis akka Pr Hamzaan ibsanitti boordiin isaaniin hoogganamu leenca daadee hinqabne tahee waan argameefi. haalli caasaa OMN keeysatti mulatuu taligaa hooggnasa mootummaa wayyaanee kan jalaa ol ajajamaa hojjatu saniin walfakkaata warri jauus nijira. Dr Hamzaaniis taatu akkaataa itti miilli mataa ajaju eeruun isaanii haaluma kana cimsa. Walfakkaachuu qofa osoo hintahin taligaan akkanaa tun muuyxannoo mootummaa wayyaneeti warri jauus tokkoo fii lamaa miti. Inumaahuu harkki mootumma wayyaanee nukeeysa seenuu hin oolle jechuudhaan warri shakkii gara biraa keeysa galees hindhabamne. Shakkii malee garuu wanni ragaadhaan ifa tahe waan hinjirreef ammaaf kanumaan bira tarree ittibaha isaa eeguun dirqama taha. ”Dubbii baha hin dhoorkanii, galuma eeganii” jedhaa mii ree oromoon hoggaa maymaaku.
Tarkaanfii Pr Hamzaa Abdurazaaq fudhatan ilaalchsee achii as yaadni garagaraa garayyu irraa dhagayamaati jira. Rakkina mudate kana furuu waan hindandayiniif jecha angoo lakkisan kan jau irraa yojalqabne furuu akka hindandayin isaaniis hinhaale. Wanni laalamuu qabu ammoo sabababa dandayuu dhabaniif hoggaa tahu caasaan sun caasaa miilli mataa itti ajaju taachaa ibsuun isaatuu gayaadha nutti fakkaata. Jaarmaya seeraan hudaawee fii biyya olaantummaan seeraa itti sirane keeysatti miila mataa ajaju san irratti tarkaanfii fudhachuun akkamitti dadhabame gaafiin jettuus kauu hinoolle. Haatahuu malee bakka boordiin silaa kana hunda raawachuuf angoo guutuu qabdu leenca daadee hinqabne taatetti dureen kophaa isaanii wanni murteeysuu dandayan waan hinjirreef haala kanaan amaanaa ummataa baadhatanii taauun garamitti nama oofa? Jechuudhaan gaafii tana gaafiidhaan warri deebisuus hammasuma takka baayyeedha. Ittigaafatama ittiin hojjachuun dadhabame baadhatanii taauun of rakkisuu caalaa dantaa ummataatiis qancarsuu akka tahe hubatamuudha qaba. Haala kanaaf dargaggoota yeroo wajjiin tarkaanfachuu dandayan ofdura buusanii duubbee gaarii tahuun osoo dandayamuu hoogganoota hangafoota qabsoo oromoo kanneen jahatanii qabsoo daran daadarkaan umriirtiis osoo isaan qucaaccuu angoo irratti cichaa jiran akka fakkiitti warri maqaa dhahuus nijira. Kanaafuu ittigaafatama tokko ittiin hojjachuun eega dadhabame baadhatanii taauun bolola angoo ykn fedhii gurraa yotahe malee gamnumaa tahuu hindandayamu. Eegasiifuu tarkaanfiin Dr Hamzaan fudhatan sun tarkaanfii sirri tan amaanaa ummataa kabajuudhaan fudhatamte akka taate hubachuun nama hindhibu.
Dr Hamzaa jechuun hayyuu olaanaa, saniifuu profeserii harvard, kan ogummaa isaatiin aalii daran ambitilleen qooda olaanaa laateef, namoota qaqqaalii oromoon akka sabaatti abalufaa dhaan qaba jettee lakkaawwattu keeysaa tokko akka tahan kan shakku hinjiru. Yojiraatees kan sammuun isaa hanqina qabdu yotahe malee kan biraa tahuu hin dandayu. Pr Hamzaan jaarmaya xiqqaa akka OMN kana osoo hintahin gamna oromoon taligaa biyyaa tan boruutiif abdatu, sadarkaa biyyaa qofattiis osoo hin hornogamin hayyuu hawaasni addunyaatiis sadarkaa fiinxee qaroomaatiin irraa barachaa jiru taachaa university harvard eeruu caalaa ragaa biraa dhiheeysuun kan barbaachisu nutti hinfakkaatu. Fedhii ofiitiin ittigaafatama isaanii lakkisuu kanaaniis wanni godhan yojiraate, akkuma guyyaa irbuu seenan ”isinitti hinkijibu” jechuudhaan waadaa galanitti amaanaan ummataa maqaa isaatiin akka hin a’amne hawaasa isaan amanetti haqa himanii harka qulqulluu fii maqaa gaariidhaan keeysaa bahuu isaaniiti. Eekaa ”dubbii ambaa dandayan fayyisaniiti galalanii, dadhaban ammoo fayya irraa galanii” ja’an moo akkam?
Karaa biraatiiniis fedhii ofiitiin angoo lakkisuudhaan Dr. Hamzaan waanni garsiisan hujii isaanii kan university keeysatti waraqaa irratti Ameerikaanota barsiisaa jiran lafa irratti Oromoota barsiisuu isaaniiti. Akka sabaatti sirna gadaa irraa dhaaluu baannullee, rakkoollee siyaasaa kanneen gita bittaa habashaa akkeeysuudhaan keeysa galle keeysaa inni tokko angoo irratti cichuudhaan qabsoo ummataa balleeysanii baduudha. Xaxoo akkasii kukkutanii keeysaa bahuun ammaas dandeeytii guddaadha gaafata. Kanaafuu aadaa booddeysituu nurratti sirantee taligaa hawaasa keenyaa waliin waarte tana injifatee bahuudhaan Dr. Hamzaan wanni mirkaneeyse tan biraa dhugumattuu goota gootaa olii tahuu isaati. Kanaafuu hoogganoota qabsoo oromootiis dabalatee ittigaafatamtootni jaarmayoota hawaasaatiis tahe qondaaltotni sadarkaa garagaraa irratti argaman hundinuu tarkaanfii Dr. Hamzaan fudhatan tana irraa barnoota fudhachuu akka qaban miilanaan dhaamsa dabarfachuu barbaadna.
Mayyii irrattiis malaggaan ar’a OMN muddatte tun laaftuu faakkaatullee yo akka lamuu hindeebinetti wal’aanamuu baatte ammoo gufuun isiin awwaaltee dabartu kan xurree boruu keenyaa akka jabaa danqitu akka taate hubachuu nufeesisa. Wanni biraa haftu yo sabaahimaan kun fashale kan biraa hundeeysuuf hawaasa amansiisuun niulfaata. Dhaloota qubee mataan haabuluutii boruuf oromoon Jawaar hedduu fii Hamzaa hedduu qofa osoo hintahin kanneen dachaa meeqaantamitti isaan caalan hedduu horuu akka dandayu shakkiin hinjiru. Haala amma keeysa jirruun ammoo kan Jawaar caalaa amansiisuu dandayuu fii kan Hamzaa caalaa amanamuu dandayu harka irraa waan hinqabneef, OMN eewaluudhaaf ammaas tahu kubbaan eenyuyyuu caalaa miila isaa lamaanii jidduudha jirti jenneeti amanna. Keeysumattuu Jawaar hanguma kalee hundaawisa isaatiif shoora guddaa taphate takka arraas OMN eewaluudhaaf irra daddeebi’ee ittiyaaduutu isa irraa eeggama nutti fakkaata. Boordiin baananiis osoo ifii bakkatti argamanii koree biraa dhaabuun maaliif akka barbaachise nuuf galuu baatullee, koree dhaabne jechuu malee murtii haqaa takkaan as bahuun kan isii dhibe fakkaatan. Lakkuma isaa dhibaawaniin ammaas kufaatiin media kanaa as dhihaachaa akka deemu ammoo kan hubatan hinfakkaatan. Haqoo haq shiroo shi jechuun keenyaas kanaafi.
Previous Fresh terror alert issued in Moyale
Next Obboo Jaafar Alii wajjiin boohartii gaarii…
Shiroo shir, haqoo haq: